qaab dhismeedka shirkadda - GUANGDONG PENGWEI FINE CHEMICAL CO., LTD
Mid ka mid ah hawlaha ugu muhiimsan ee loo maareeyo hay'ad kasta oo shaqaale ka ah dhowr qof ayaa ah in la ogaado qaab-dhismeedkeeda, iyo in la beddelo marka iyo marka loo baahdo.
Ururada badankoodu waxay leeyihiin qaab dhismeed kala sareyn ama Ahraamta, oo ay ku jiraan hal qof ama koox dad ah oo ugu sarreeya. Waxa jira xariiq cad ama silsilad amar ah oo ku socda Ahraamta. Dhammaan dadka ururka ku jira waxay garanayaan go'aamada ay awoodaan inay qaataan, cidda ka sarraysa ama madaxdooda ah cidda ay u sheegaan, iyo cidda ay hoos yimaadaan oo ay yihiin kuwa ay tilmaami karaan.
Guangdong Pengwei Fine Chemical Co., Ltd wuxuu ka kooban yahay waaxyo badan oo leh karti xirfadeed sida kooxda R&D, Kooxda Iibka, Kooxda Xakamaynta Tayada iyo wixii la mid ah. Iyadoo la adeegsanayo isku dhafka qaybaha kala duwan, dhammaan alaabtayada waxaa loo cabbiri doonaa si sax ah waxayna u hoggaansamaan shuruudaha macaamiisha. Kooxdayada iibka ayaa ku siin doona jawaab celin 3 saacadood gudahood, diyaarinta si dhakhso ah wax soo saarka, siin doonaa bixinta degdeg ah.
Intaa waxaa dheer, iyada oo loo marayo qaab-dhismeedka shirkadeed oo xooggan, waxaan noqon doonnaa kuwo ku takhasusay shaqadayada waxaanan yeelan doonnaa suurtogalnimo wanaagsan oo aan ku xaqiijin karno kartidayada.
Wax kasta oo aad u baahan tahay si aad u abuurto degel qurux badan